ပုံနှိပ်ခြင်းသို့ အပိုတန်ဖိုးထည့်ခြင်း - Intec Printing Solutions Ltd
Foiling၊ lamination နှင့် holographics
မော်ဒယ်အလိုက် ထုတ်ကုန်ကို ရှာပါ။
ယာဉ်မောင်း & downloads
ColorSplash အသုံးပြုသူလက်စွဲ နိုင်ငံတကာဘာသာစကားများ
'လုပ်နည်း' ဗီဒီယို ပံ့ပိုးမှု
MSDS - ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေး
အကြံပြုထားသော & အသိအမှတ်ပြုမီဒီယာ
အသုံးချမှုများနှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက် ကျယ်ပြန့်သော မော်ဒယ်များ
Foiling & Lamination စနစ်များ
ဆိုးဆေး ဖောင်များ၊ ကြမ်းပြင်များနှင့် ဟိုလိုဂရာဖစ်ရုပ်ရှင်များဖြင့် ပရီမီယံအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ထည့်သွင်းပါ။
Modular၊ မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ရှိသော ဂရပ်ဖစ်အနုပညာ ပရင်တာများ
ဒစ်ဂျစ်တယ် အံစာတုံးများ | Foilers နှင့် Laminator များ
Intec သည် 1989 ခုနှစ်ကတည်းက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် အချောထည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် ဗြိတိန်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် ဒီဇိုင်း၏ဗဟိုချက်တွင်ရှိပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်ပရင်တာများ၊ ဖောင်များနှင့် ဖြတ်တောက်သည့်ကိရိယာများအတွက် ထူးခြားသောဖြေရှင်းချက်များအတွက် အဓိကရောင်းချသူဖြစ်လာခဲ့သည်။
ထုပ်ပိုးမှုမှ အညွှန်းများအထိ ကျယ်ပြန့်သော အပလီကေးရှင်းများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြတ်တောက်ခြင်း နှင့် အနမ်းဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းနည်းများ ရွေးချယ်မှု။ Flatbeds များနှင့် အလိုအလျောက် အစာဖြတ်တောက်ခြင်းစနစ်များ၊ လုပ်ငန်းကတ်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်များနှင့် သီးသန့်စာရွက်အနမ်းဖြတ်တောက်ခြင်း တံဆိပ်ဖြတ်ခြင်းစနစ်များ။
ဒက်စ်တော့နှင့် အလွတ်တန်းရှိ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် dual foiling နှင့် lamination ကိရိယာများ၊ သတ္တုသတ္တုပြားများ၊ ကြမ်းမွှားများနှင့် ဟိုလိုဂစ်ဖစ်သက်ရောက်မှုများ ထည့်သွင်းရန်အတွက် တတ်နိုင်ပြီး လိုအပ်သလောက်သာ အိမ်တွင်းဖြေရှင်းချက်ကို ပေးဆောင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ပုံနှိပ်စာရွက်များတွင် ပရီမီယံအချောထည်များနှင့် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အလွယ်တကူထည့်ပါ။
Media အမျိုးအစားများစွာကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အတန်းလိုက် ဦးဆောင်ပြီး တတ်နိုင်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပရင်တာများ။ အကွာအဝေးတွင် ကတ်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးမှု၊ နဖူးစည်းများ၊ အညွှန်းများ၊ စာအိတ်များ၊ လွှဲပြောင်းမီဒီယာနှင့် အခြားအရာများအတွက် ရွေးချယ်မှု4ရောင် မော်ဒယ်များ ပါဝင်သည်။
ColorCut FB775 ဒစ်ဂျစ်တယ်မီးရှုး
အတန်းခေါင်းဆောင် ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် တွန့်ခြင်း အင်အားစုများ
မြန်၊ အစွမ်းထက်၊ တတ်နိုင်သည်!
FB775 အသစ်ကို ကြည့်ပါ။
လက်ရှိ Intec ထုတ်ကုန်အပိုင်းအခြားကို ကြည့်ပါ။
ထုတ်ကုန်လက်ကမ်းစာစောင်များကို ကြည့်ရှုပြီး ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စကားလုံးအတွက်သာ မယူလိုက်ပါနှင့်၊ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များပြောသည့်အတိုင်း ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုအတွက် နှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Intec ColorFlare သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ငွေကုန်သက်သာစေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ သက်တမ်းရှည်တည်ထောင်ထားသော ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်များကို ဆောင်ကျဉ်းပေးပါသည်။
Lee Bowyer ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ColorCut ပြားချပ်ချပ်ဖြတ်စက်သည် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို တိုးမြင့်စေပြီး အခွင့်အလမ်းသစ်များ ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို တော်လှန်ရန် လေးလေးနက်နက် ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုပ်၏အရည်အသွေးကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် လျင်မြန်စွာနှင့် လိုအပ်သလောက်နမူနာတစ်ခုလုံးကိုပင် နမူနာပုံစံတစ်မျိုးတည်း သို့မဟုတ် နမူနာတစ်သုတ်ကိုပင် ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
Intec မှ အဝေးထိန်းပံ့ပိုးမှု လိုအပ်ပါသလား။
Intec နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူထံမှ ချက်ချင်းအကူအညီရယူပါ - ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်မျက်နှာပြင်ကို TeamViewer မှတစ်ဆင့် မျှဝေပြီး သင်၏ Intec စက်ကိရိယာများနှင့် သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးပါမည်။ ဘောလုံးလှိမ့်ရန် ဦးစွာ Intec ကိုခေါ်ပါ။
TeamViewer မှတစ်ဆင့် အကူအညီရယူပါ။
Intec UK ရုံးချုပ်-
11B Dawkins Road စက်မှုဇုန်၊ Poole၊ BH15 4JP UK
North Tampa စီးပွားရေးစင်တာ 16011 N. Nebraska Avenue
Lutz၊ ​​FL 33549
Intec သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ပြန်လည်ရောင်းချသူများကွန်ရက်ကို ပံ့ပိုးပေးသော UK နှင့် USA ရှိ ရုံးခန်းများပါရှိသော အမှန်တကယ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 30 ကျော်က တည်ထောင်ခဲ့သော Intec သည် ပုံနှိပ်နှင့် ဂရပ်ဖစ်လုပ်ငန်းအတွက် သီးသန့်ရည်ရွယ်သည့် ၎င်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ အထူးပြုထုတ်ကုန်များအတွက် အထူးဂုဏ်ယူပါသည်။ ဒီမှာပို Read. Intec သည် ၎င်း၏မှတစ်ဆင့် 'ခြားနားချက်တစ်ခုကို ဖန်တီးနေသည်' ကိုဖတ်ပါ။ ပရဟိတလုပ်ငန်း.
မူဝါဒများ & ဖော်ပြချက်
Intec UK သို့ ဆက်သွယ်ပါ။
Intec USA သို့ ဆက်သွယ်ပါ။
သတင်းလွှာစာမျက်နှာတွင်စာရင်းသွင်းပါ။ သတင်းရဖို့အတွက် ပထမဆုံးပါဝင်ဖို့။
ကျွန်ုပ်တို့ကို အီးမေးလ်မပို့မီ အဘယ်ကြောင့် Intec သတင်းလွှာကို စာရင်းသွင်းပါ - နှင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိရန် အဘယ်ကြောင့်နည်း။
[contact-form-7 id="320" title="အရောင်းဆက်သွယ်ရန်"]
Intec ကို အီးမေးလ်ပို့ပါ။